9 Halbeegyada SEO ee Muhiimka ah si aad ula Socoto ( Sida Loo Hagaajiyo) | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/9 Halbeegyada SEO ee Muhiimka ah si aad ula Socoto ( Sida Loo Horumariyo)
9 Halbeegyada SEO ee Muhiimka ah si aad ula Socoto ( Sida Loo Horumariyo)
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan suuq-geynta dhijitaalka ah (oo ka sarreeya suuq-geynta khadka tooska ah ee caadiga ah) waa inaad cabbiri karto ku dhawaad ​​qayb kasta oo ka mid ah istiraatiijiyaddaada. Aaladaha bilaashka ah sida Google Analytics waxay bixiyaan macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan sida website-kaagu u shaqeeyo, markaa weligaa ma ogaan kartid in dadaalkaaga SEO uu keenayo natiijooyin sax ah.
Laakiin dhibcaha xogta ayaa aad u ballaaran oo ganacsiyo badan, dhibaatadu maaha xog la'aan laakiin halkii la ogaan lahaa cabbirada SEO ee diiradda saaraya.
Qoraalkan, waan ku dhex mari doonaa
Sagaal ka mid ah cabbirada SEO ee ugu muhiimsan iyo waxa ay ula jeedaan.
Laba mitir oo la iska indhatiro (ama laga eego xagal kale).
Halkee laga helaa Google Analytics iyo sida loo hagaajiyo
Markaad la socoto cabbirada saxda ah, waxaad heli kartaa sawir sax ah oo ku saabsan waxqabadkaaga, si joogto ah u wanaaji istaraatiijiyadaada, oo ugu dambeyntii kordhiso darajooyinka iyo ROI.
9 mitir oo muhiim ah oo SEO ah si aad ula socoto
Markaad qiimaynayso guusha istiraatiijiyadaada SEO, waxaa jira qiyaaso aan dhamaad lahayn oo aad la socon karto. Si lagaaga caawiyo inaad diirada saarto cabbirada saxda ah - iyadoon loo eegin waxa ganacsigaagu ku saabsan yahay - halkan waxaa ah sagaalka cabbir ee ugu sarreeya SEO iyo sida loola socdo.
1. Gaadiidka dabiiciga ah
Aan ku bilowno mid cad. Taraafikada dabiiciga ah waa taraafikada aad ka hesho bogga natiijooyinka raadinta mashiinka raadinta (SERPs) adoon bixinin meelaynta xayeysiiska.
Guud ahaan gaadiidkaagu waxa uu ka iman karaa ilo badan (matoorada raadinta, shabakadaha bulshada, baadhitaano toos ah, goobo kale), oo soo koobaya diiraddaada organic taraafiggu waxa uu tusayaa muuqaalka mareegahaaga ee raadinta ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha meheraddaada iyo goobtaada. Markaa haddii istaraatiijiyadaada SEO ay shaqeyso, tirada booqdayaasha aad kasbato natiijooyinka raadinta waa inay si joogto ah kor ugu kacdaa.
Si aad ula socoto taraafikada dabiiciga ah ee Google Analytics, gal dashboardkaaga oo dooro "Ku dar Qaybta" Dulmarka Dhageystayaasha ee caadiga ah.
Dooro "Organic Traffic" oo ku dhufo "Codso".
Waxaad hadda u arki kartaa taraafikada dabiiciga ah sida boqolkiiba wadarta taraafikada.
2. Qiimaha gujinta (CTR)
Heerkaaga gujin ee organic wuxuu muujinayaa boqolkiiba dadka soo booqda website-kaaga ka dib markii ay ku turunturoodaan boggaga internetka ee SERPs. Markaa haddii 1,000 baadhayaashu ay ku arkaan liiska boggaaga natiijooyinka raadinta oo 100 qof ay gujiyaan mareegahaaga, CTR-gaaga boggaas waa 10%.
Organic CTR waxay tusinaysaa sida ugu wanaagsan ee liiskaaga (oo wata ciwaanka, sharaxaada meta, iyo URL) u soo jiidato dhagaystayaashaada iyo sida ugu wanaagsan ee ay u maamusho inay soo jiidato dareenkooda.
Haddii CTR-gaagu hooseeyo, waxay la macno noqon kartaa cinwaankaaga ama sharraxaadda meta maaha mid soo jiidasho leh, ama waxa ku jira kuma xidhna waxa isticmaaluhu raadinayo. Waa kuwan siyaabo aad ku hagaajin karto CTR-gaaga organic.
Waxaad si toos ah ula socon kartaa CTR gudaha Google Search Console oo hoos timaada tabka "Performance".
Ku arag CTR bogga, weydiimo, ama qalab. Gaar ahaan, la socodka CTR ee bogga waxay ku siinaysaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan nuxurka aan keenayn gujis ku filan iyada oo loo marayo SERPs.
Baro siyaabo badan oo loo isticmaalo Google Search Console si loo horumariyo SEO gaaga.
3. Heerka bixitaanka
Sida magacu soo jeediyo, boggaga ka bixista waa bogga ugu dambeeya ee booqdayaashaada ka hor intaadan ka tagin mareegahaaga.
Bogaggaaga ugu sarreeya ee ka bixista waa kuwa dadka ka dhigaya inay lumiyaan xiisaha boggaaga oo ay aadaan meelo kale. Kuwani waa aagagga mareegahaaga halkaasoo inta badan booqdayaashu ay ka soo degaan, markaa waa muhiim inaad la socoto boggaga bixista ee ugu sarreeya.
Markaa haddii aad aragto in qayb weyn oo ka mid ah taraafikadaada ay baxaan ka dib markay booqdaan bog gaar ah, waxay soo jeedin kartaa in bogga ama nuxurkiisu u baahan yahay inuu shaqeeyo.
Si aad ula socoto boqolleyda ka bixista boggaga gaarka ah, u gudub "Dhaqanka"> "Qodobka Goobta"> "Dhammaan Bogagga".
Si loo dhimo heerka ka bixista boggaga, waxaad awoodaa:
Hubi in qaabka boggaaga iyo qaabdhismeedka ka kooban yahay ay fududahay in la fahmo.
Ku dar xiriiryo gudaha ah oo cad iyo wicitaanno ficil ah si aad ugu hagto booqdayaasha macluumaadka iyo boggaga kale ee khuseeya.
Ku dar waxyaabo tayo leh, oo ay ku jiraan muuqaallo (sawir iyo muuqaal) si aad si wanaagsan uga qayb-gasho booqdayaasha.
4. Bogagga fadhiga
Halbeegga ka-qaybgalka isticmaalaha goobta ee muhiimka ah, bogag fadhigiiba waxa ay tilmaamayaan tirada boggaga isticmaalayaashaadu booqdaan celcelis ahaan ka hor intaysan ku dalacsiin adieu goobtaada. Markasta oo uu sareeyo mitirkani wuu fiicnaan doonaa, maxaa yeelay waxay la macno tahay dadku waxay booqanayaan bogag badan oo ay ku dheggan yihiin waqti dheer.
Falanqaynta Google-ka, u tag "Lahaanshaha"> "Dhammaan Gaadiidka"> "Channels" si aad u aragto boggaga kalfadhi kasta kanaalka taraafikada.
Haddi cabbirkani hooseeyo, waxa laga yaaba in ay tilmaanto in qoraalkaagu aanu ahayn mid soo jiidasho leh ama aan ku haboonayn booqdayaasha si ay u eegaan bogag kale. Mise, waxay la macno tahay in goobtaada navigation-ka aanu ahayn mid isticmaale-saaxiibtinimo ah. Talooyinka kor ku xusan ee boggaga ka bixista sare ayaa halkan lagu dabaqi karaa sidoo kale.
5. Celceliska wakhtiga rarista bogga
Xawaraha goobtaadu waa qodob muhiim ah oo SEO ah (labadaba miiska iyo mobilada) waxayna samayn kartaa ama jebin kartaa darajadaada (iyo khibrada isticmaale).
Celceliska wakhtiga rarista bogga waa wakhtiga la qaatay in lagu soo bandhigo waxa buuxa ee bogga. Waxaad ka heli kartaa mitirkan hoosta "Dhaqanka"> "Xawaaraha goobta". Waxaad markaas arki kartaa celceliska wakhtigaaga rarka dhammaan boggaga, ama hubi wakhtiyada boggaga gaarka ah.
6. Muhiimada Mareegaha Muhiimka ah
Google ayaa si isa soo taraysa u bedelaysa diirada ay ku hayso boggaga internetka ee abaal marinta bixiya ee bixiya khibrad adeegsi oo farxad leh (UX) oo leh darajooyin sare, iyo sida wanaagsan (iyo dhaqsaha badan) ee boggagaagu u yahay wadnaha UX.
Halbeegyada waxqabadka caadiga ah sida wakhtiga culeyska iyo DOMContentLoaded diiradda saaraya faahfaahinta ay fududahay in la cabbiro laakiin aan qasab ahayn in si wanaagsan loo turjumo waxa isticmaalayaashu ay daneeyaan. Markaa haddii aad diirada saarto kaliya inaad wanaajiso celceliska wakhtiga culeyska boggaaga, waxaad ku dhamaan kartaa degel kaas oo wali bixiya UX liita.
Markaa, Google waxay qaaday mitirka xawaaraha sare tallaabo dheeraad ah sanadka 2020 iyadoo soo bandhigtay Core Web Vitals. Kuwani waa halbeegyada waxqabadka isticmaale-u-xun waxayna u adeegaan sidii granular, habka UX-xuddun u ah ee cabbiraadda wakhtiga rarida bogga.
Halkan waxaa ah sharraxaad kooban oo ku saabsan saddexda Muhiimka ah ee Shabakadda Muhiimka ah sida ku cad blog-ka rasmiga ah ee Chromium:
Dib-u-dhigga Wax-soo-saarka Koowaad (FID) waxay cabbirtaa jawaab-celinta waxayna qiyaasaysaa khibradda isticmaalayaashu dareemaan markay isku dayayaan inay marka hore la falgalaan bogga.
Shift Isugeynta Isugeynta (CLS) wuxuu cabbiraa xasilloonida muuqaalka wuxuuna qiyaasaa qaddarka isbeddelka qaabaynta lama filaanka ah ee bogga muuqda.
Rinjiga ugu Muhiimsan (LCP) waxay cabbirtaa xawaaraha culayska ee la dareemay waxayna calamaynaysaa barta wakhtiga xawliga rarka bogga marka waxa ugu muhiimsan bogga ay u badan tahay in la raray.
Qaybta "Horumarinta" ee Console Raadinta Google waxay ku tusinaysaa sida boggaga ku yaal goobtaada ay u fuliyaan iyagoo ku saleysan Muhiimada Shabakadda Muhiimka ah, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Google's PageSpeed ​​​​Insights Tool si aad u gasho cabbiradan oo aad u hesho talooyin si aad u horumariso waxqabadka goobtaada.
Madaxa halkan shan siyaabood oo aad ku hagaajin karto Muhiimada Shabakadda Muhiimka ah.
7. Backlinks iyo domains tixraac
Backlinks waa mid ka mid ah calaamadaha darajada ugu muhiimsan ee Google. Waxaa dheer, daraasad dhowaan lagu sameeyay in ka badan 11 milyan oo natiijooyinka raadinta Google waxay soo jeedinaysaa inuu jiro xidhiidh xooggan oo u dhexeeya darajooyinka iyo tirada meelaha la tixraacayo.
Tirada backlinks waxaa ka mid ah dhammaan xiriirada ka imanaya ilo dibadeed oo tilmaamaya goobtaada, halka tixraacyadu ay ka dhigan yihiin tirada goobo gaar ah oo aad ka leedahay xiriiriyeyaasha soo socda.
Tayada backlinks ayaa ka muhiimsan tirada. Toban xiriiriye oo ka socda goobo tayo sare leh iyo kuwa awood leh ayaa ka qiimo badan 100 dib-u-xireyaasha laga soo bilaabo xayndaabyada tayada sare leh ama kuwa hooseeya. Sidoo kale, in kasta oo xiriir kasta oo aad dhisto uu kaa caawin karo SEO-gaaga, xiriirinta xayndaabka cusub ee tixraaca ayaa caadi ahaan aad uga awood badan xiriirada xayndaabyada horeba kugu xiray.
Ahrefs waa aalad SEO ah oo aad u fiican si aad ula socoto xiriiriyahaaga dambe iyo meelaha tixraaca. Waxaad arki kartaa liiska boggaga internetka ee adiga kugu xiraya, bogaggee ay ku xiran yihiin, iyo qiimeynta xayndaabkan tixraaca.
8. Erayada muhiimka ah ee ugu sarreeya
Markaad ka shaqeyso hagaajinta mareegahaaga si aad ugu darajeyso ereyada muhiimka ah ee aad beegsaneyso, waa fikrad wanaagsan inaad la socoto sida qiimeyntaada ereyada muhiimka ah ay isu beddelaan.
Adigoo og ereyada muhiimka ah ee aad ku jirto darajada, waxaad helaysaa dareenka saamigaaga muuqalka raadinta organic ee hadda oo waxaad go'aansan kartaa inaad diirada saarto sii wanaajinta ereyada muhiimka ah ama bartilmaameedka ereyada kale ee muhiimka ah ee aad rabto inaad ku darajo laakiin aadan weli ahayn.
Waxaad la socon kartaa ereyada muhiimka ah ee aad ku jirto adigoo isticmaalaya qalab raadraaca booska sida SEMrush. Warbixinta Mawqifyada Goobidda Dabiiciga ah ee hoos lagu muujiyey waxay kaa caawinaysaa inaad la socoto isbeddelada darajada ee wakhtiga oo aad aragto sida guud ahaan muuqaalka raadintaadu u soo hagaagayso.
9. Bogag gurguuran maalintii
Qiyaasta gurguurashada degdega ah waxay la macno tahay gurguurta Google-gu waxay si fudud oo degdeg ah u tixgalin karaan goobtaada, hagaajinta fursadahaaga inaad ku kasbato darajo sare SERPs.
Gudaha Google Search Console, waxaad ku arki kartaa inta bog ee Googlebotku gurguurto maalin kasta (90-kii maalmood ee u dambeeyay) adoo aadaya Settings> Gurguurte stats.
Haddii aad leedahay boqollaal bog oo kaliya boqolkiiba iyaga ka mid ah ay gurguuranayaan, waxa ay tilmaami kartaa arrin ku saabsan miisaaniyada gurguurashada. Googlebot ma gurguuran doonto mareegahaaga oo dhan haddii ay tahay inay ku isticmaasho wax badan oo ka mid ah ilaha nidaamkaaga marka sidaas la samaynayo.
Iyadoo korodhka heerka gurguurashada aanu qasab ahayn inuu horseedo darajooyin wanaagsan, waa cabbir SEO ah oo u qalma la socodka iyo tayaynta.
2 cabbir SEO ah oo la iska indhatiro
Iyadoo xog aad u badan oo laga heli karo aaladaha falanqaynta casriga ah, waa wax aad u xiiso badan in wax walba loo tixgeliyo sidii KPIs si loo helo sawir buuxa. Laakiin xogta sida khaldan loo isticmaalo waxay noqon kartaa wax khiyaano ah. Waa kuwan dhowr cabbir oo ay tahay inaad iska indhatirto ama u eegto si ka duwan.
Midkani waa hubaal in laga doodi karo, laakiin si fudud u eegida tirada beddelka ee boggaaga wakhti cayiman sida cabbirka waxqabadka goobtaada waxay noqon kartaa qalad. Taasi waa sababta oo ah beddelaaddu ma gudbiyaan sheekada oo dhan.
Tusaale ahaan, haddii 10 booqde ah ay wax ka iibsadeen mareegahaaga shalay, laakiin afar keliya ayaa maanta sameeyay, mareegahaagu maanta ma liito? qasab maaha. Haddii alaabta maanta la iibiyo ay ka qaalisan yihiin kuwii aad shalay iibisay, ama haddii wadarta qiimaha dalabku uu ka sarreeyo kii shalay, tirada beddelka ayaa siinaysa aragti aan sax ahayn oo ku saabsan sida wanaagsan ee goobtaadu u shaqeyso.
Intaa waxaa dheer, beddelaaddu waxay macnaheedu noqon kartaa waxyaabo kala duwan oo loogu talagalay mareegaha kala duwan, laga bilaabo buuxinta foomka warsidaha ilaa diiwaangelinta webinar. Dhammaan kuwan uma tarjumaan dakhliga ganacsigaaga. Markaa waxaad yeelan kartaa tiro isbeddel ah oo cajiib ah laakiin wax dakhli ah kama soo saarin iyaga.
Si fudud loo dhigo, beddelka SEO waxay macnaheedu noqon kartaa waxyaabo badan oo aan ahayn iibsashada. Oo haddii aakhirka aysan u horseedin dakhli, waa inaysan noqon mitir sare oo lagu raad raaco.
2. Heerka boobka
Heerka booqashadu waa boqolkiiba booqdayaasha ka taga goobtaada ka dib markay booqdeen hal bog oo keliya. Waxay ka dhigan tahay in booqde uusan riixin wax xiriiriye gudaha ah si uu u eego bogag kale oo ku yaal mareegahaaga.
Tixgelinta celceliska heerka boobka ee goobta oo dhan sida mitirka SEO maaha fikrad wanaagsan. Taasi waa sababta oo ah heerka soo kabashada sare wuxuu yeelan karaa macnayaal kala duwan oo aan qasab ahayn in la bixiyo aragti la taaban karo.
In kasta oo ay muujin karto nuxur aan khusayn ama nakhshad xumo ama hagitaan, waxa ay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa in nuxurkaagu uu isla markaaba si buuxda u qanciyo waydiimaha isticmaalaha.
Tusaale ahaan, Haddii booqde si dabiici ah ugu soo degto boostadaada blog, ka akhriyo boostada kor ilaa hoos, oo ka tago ku qanacsanaanta qaadashada la qaadi karo, weli waxay u kala soocaysaa "boodbood". Run ahaantii, boostadaada si buuxda ayaa loo akhriyay oo waxaa faa'iido u helay booqdaha.
Si aad u eegto mitirkan heerka bogga waa fiican tahay, laakiin isticmaalka celceliska heerka boodka ee goobta oo dhan sida mitir muhiim ah waxay noqon kartaa marin habaabin.
Marka la soo koobo, haddii heerarka bounce ay aad u kala duwan yihiin, si fudud ma ogaan kartid in celceliska heerka bounce ee kor u kacaya ama hoos u dhacaya uu yahay shay wanaagsan ama xun.
Bilow la socoshada qiyaasahaaga SEO hadda
Haddii aadan weli la socon sagaalka cabbir ee ugu sarreeya ee kor lagu sheegay, waa waqtigii aad bilaabi lahayd. Nasiib wanaag, oo leh dhowr qalab oo bilaash ah oo la awoodi karo sida Google Analytics, Console Search, iyo Ahrefs (ama SEMrush), waxaad si fudud ula socon kartaa dhammaan cabbirradan SEO oo waxaad bilaabi kartaa hagaajin joogto ah.
Markaa, diyaari qalabkaaga SEO oo bilow daba-galka!
Gaadiidka dabiiciga ah
Celceliska wakhtiga rarista bogga
Vital Muhiimka ah
Dib-u-celinta iyo xayndaabka tixraaca
Bogaggu gurguuran jireen maalintii
Waa maxay Cache? Baro Farsamadan Caadiga ah iyo Kakan
Xog-Ogaysiinta vs Xog-Driven: Waa maxay faraqa u dhexeeya?